Ra’iisul Wasaaraha oo u kuur galey howlaha shaqo ee Dekedda Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaaraha oo u kuur galey howlaha shaqo ee Dekedda Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha oo u kuur galey howlaha shaqo ee Dekedda Muqdisho.
Muqdisho, 06 June 2017…Ra’iisul Wasaaraha XFD Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kormeer shaqo ku tagey Dekedda Muqdisho, waxaana ku soo dhaweeyey Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Marwo Maryan Aweys, Maareeyaha Dekada Muqdisho iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala, wuxuna mid mid u booqdey xafiisyada ay ku howl-galaan shaqaalaha dekedda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa maamulka dekadda kala hadlay sidii loo dar-dargelin lahaa shaqada, loona horumarin lahaa dekedda Muqdisho, sidoo kalena waxuu la sheekeestey Ganacsatada alaabta kala soo dageysey dekadda, isagoona ka wareystey sida loola dhaqmo marka ay usoo degayaan badeecooyinka. Waxuu maamulka dekadda ugu baaqey iney ilaaliyaa xariirka Ganacsatada, loona fududeeyo sidii ay ganacsigooda hab nidaam ah u mari lahaa.
“Waa iney helaan Ganacsatada Soomaaliyeed qadarin gooniya si loo dareensiiyo iney dalkan iyagu leeyihiin, taasina waxaa keeni karta iyadoo loo fududeeyo Ganacsigooda”ayuu yiri R/W Xasan Cali Kheyre.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo komeerray taliska 43-aad xoogga dalka ee Kismaayo
Next articleGaroowe oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka